शशांक कोइरालाको घोषणा : देउवालाई सभापतिबाट नहटाएसम्म विश्राम लिन्न (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
शशांक कोइरालाको घोषणा : देउवालाई सभापतिबाट नहटाएसम्म विश्राम लिन्न (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १३ पुष । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सभापतिबाट नहटाएसम्म आफूले विश्राम नलिने स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यंक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हिजो बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्णयले महाधिवेशनको कार्यतालिकालगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि महामन्त्री कोइरालालगायतका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । यही सन्दर्भमा पत्रकार धमलाले कोइरालासँग विशेष अन्तर्वार्ता लिएका छन् । उक्त कुराकानीमा कोइरालाले आगामी महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म पार्टीका कुनैपनि बैठकमा सहभागिता नजाउने घोषणासमेत गरेका छन् ।
उनले सभापति देउवाले पार्टीलार्य भताभुङ पारेको आरोपसमेत लगाएका छन् । यद्धपी १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामा भने आफ्नो कुनैपनि विमति नरहेको उनको जिकिर छ । उनले भने,‘उहाँले एकलौटी निर्णय किन गर्नुभयो ? यसमा हाम्रो आपत्ति हो ।’
महामन्त्री कोइरालाले नेविसंघको तदर्थ समितिको अध्यक्षमा राजिव ढुंगानालाई बनाउने देउवाको प्रस्ताव रहेको पनि जानकारी दिए । उक्त प्रस्तावमा तीन जना महामन्त्रीमा क्रमशः बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र सभापति देउवालाई एक–एक जना राख्ने कुरा उल्लेख रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कोइरालाले पार्टीभित्र सभापति देउवा कमजोर रहेको बताउँदै आउने महाधिवेशनमा परास्त गर्ने समेत सार्वजनिक घोषणा गरे । उनले भने,‘देउवाजीको बहुमत केन्द्रिय समितिमा मात्रै छ, उहाँ पार्टीभित्र बहुमतमा हुनुहुन्न, कार्यकर्ताले उहाँलाई रुचाएका छैनन् ।’
शेरबहादुरजीको पहिलो उत्तराधिकारी म हुँ, विमलेन्द्र निधिले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ : गोपालमान श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले आफू यसपटक
कमल थापाको नेतृत्व असफल भैसक्यो, अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन् : रेखा थापा (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १४ मंसिर । चर्चित नायिका तथा राप्रपाकी नेतृ रेखा थापाले अहिलेपनि राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन
ओलीलाई भीम रावलको चुनौती : म त अत्यधिक मतले जित्छु जस्तो लाग्यो, नभए मसँग मतदान गर्न किन डराएको ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १२ मंसिर । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
एमाले नेता सत्यनारायण मण्डलको आरोप : शम्भु थापा बढी घुस खाएर बौलाइसक्यो (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १२ मंसिर । नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु
मैले प्रचण्डलाई गद्दार भनेर छोडेको हुँ, अब के को सहकार्य हुनु ? : दुर्गा प्रसाई (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) का नेता दुर्गा प्रसाईले आफूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का